Zimbabwe Return to Test Cricket at Home – Chirundu.com – Bike Racing for the Self Coached Cyclist on a Budget
Zimbabwe Cricket welcomes Bangladesh to restart their test career again this month.
The first and only Test match against Bangladesh will be played from 4th to the 8th of August 2011 at Harare Sports Club with Brendan Taylor leading the Zimbabwean side.
Cricket Zimbabwe withdrew from Test Cricket almost 6 years ago in September 2005 and the hope is that now with some major rebuilding they should be good enough to be competitive.
Test Cricket provides great opportunity for Cricket in Zimbabwe, and now its up to Cricket Zimbabwe, their coach and players on how they grab it and bring back good years of Zimbabwean Cricket.
Zimbabwe Squad News
Brendan Taylor (capt), Regis Chakabva, Elton Chigumbura, Craig Ervine, Hamilton Masakadza, Tino Mawoyo, Keegan Meth, Chris Mpofu, Ray Price, Vusi Sibanda, Tatenda Taibu (wk), Prosper Utseya, Brian Vitori
Test cricket presented the Zimbabwean selectors with an issue of getting the right balance to the side, this was probably not felt quite as acutely as in the limited-overs sides that have recently been selected.
The dependable Tatenda Taibu looks most likely to keep wicket, but Zimbabwe will probably have to break up one of their most dependable bowling partnerships, as only one of either Utseya and Ray Price are expected to be included in the team. While both men are automatic selections in limited-overs cricket, Zimbabwe are attempting to move away from their reliance on spin as they re-enter the Test arena.
It is also probably safe to assume that Chris Mpofu will take the new ball, it’s not entirely clear whether Vitori or Keegan Meth will partner him.
Probably Zimbabwe’s biggest weakness is their opening pair of Vusi Sibanda and Tino Mawoyo. Whilst they were able to hang on for almost 55 overs in the first innings of Zimbabwe’s match against Australia in Harare two weeks ago, neither gave you the feeling that they were very comfortable.
Bangladesh tour Zimbabwe 2011 Fixture Details
Thu Aug 4 – Mon Aug 8: Only Test – Zimbabwe v Bangladesh at Harare Sports Club
Zim also take on Bangladesh in a series of one day internationals:
First ODI: 12 August, Harare
Second ODI: 14 August, Harare
Third ODI: 16 August, Harare
Fourth ODI: 19 August, Bulawayo
Fifth ODI: 21 August, Bulawayo
← Zimbabwean wins top writing prize for tale of starving children
Zimbabwe vs Bangladesh – Zim win by 130 runs →
Wallabie’s Zimbo David Pocock helps fight poverty in Zimbabwe
February 25, 2012 Chirundu Jason 0
April 28, 2010 Chirundu Jason 0